Somaliland: Barlaamanka iyo Guurtida Doorosho La’aan Ma Shaqeynayaan | Baligubadlemedia.com
Waxaa la filayey in sannadka soo socda bisha seddeexin la qabto doorashooyinkii Barlamaanka iyo kuwii dawlada hoose. Lakiin, sida la isla dhexmarayo, waxaad modaa in uu Guddiga Doorashooyinka ee Somaliland damacsanyihiin in dib loo dhigo. Arrintani ma aha mid qancinasa ummada Somaliland iyo asxaabta caalamkaba.
Adduunka lagama maqal Barlamaan fadhiyey in 13 sannadood! Waa arrin cajiib ah. Haddii uu Barlamaankani awoodi kari waayey in uu sameeyo saami qaybsi cusub, waa in la doorto xildhibaani cusub oo sameeya sharciyo cusub. Barlamaanka fadhiyey in ka badan 13 sannadood, ma aha mid dalka iyo dadka wax u kordhinaya, waa xilidhibaano mushahar uun guranaya, oo ka dhigtay shuqul.
Waxaa loo baahanyahay in aan doorashoyinka dib loo dhigin. Waa in la doorto Barlamaan cusub iyo dowlada hoose oo cusub.
Marka dooroshoyinka la qabto, waa in loo soo jeesto Aqalka Guurtida, oo isaguna ilaa iyo 20 sannadood fadhiyey. Sida la wada ogyahay Guurtida lama doorto, oo dastuurku wuxuu ugu talo galay in uu noqdo aqal ah, la taliye iyo aqbalaad, “Advice and consent”. Lakiinse, wakhtigan la joogo, Guurtidii, waxay noqotay meel la iska dhaxlo, waxay u baahantahay dib uu eegid iyo horumarin.
Somaliland waa dal qaan gaadhiyey oo leh dad waxbartay oo khibrado cusub leh, waa la soo dhaafay wakhtigii lagu shaqeyn jiray siyaamo bulsho ama qabiil. Waddanku dastuur buu leeyahay, sharci buu leeyahay, la iskuma wadi karo arrin sharci iyo arrin qabiil.
Dastuur waa sida buug had iyo jeer la qoraya, marna wax lagu darayo, marna wax laga bedelayo, lakiin ma shaqeyn karo haddii golayaashii maamulihaa dastuurka ay iyaguba fadhiisteen.